အခ်စ္ေရး Archives - MM Daily Life
သင့်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ချစ်သူကို နောင်တရသွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း(၅)မျိုး…
May 27, 2022 by MM Daily Life
သင့်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ချစ်သူကို နောင်တရသွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း(၅)မျိုး… ကိုယ့်ဘက်က ချစ်နိုင်သလောက်ချစ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ချစ်မှန်းသိလို့ အနိုင်ယူပြီး ကိုယ့်အချစ်တွေကို တန်ဖိုးမထားပဲ ပစ်ချခဲ့တဲ့သူမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါ ဒီအတွက် ပြိုလဲခံစားမနေပါနဲ့ …။ ကိုယ့်အချစ်တွေကိုတန်ဖိုးမထားခဲ့တဲ့သူအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်မခံဘဲ သူတို့တွေနောင်တရသွားအောင် ဒီလိုနည်းလေးတွေနဲ့ တုံ့ပြန်လိုက်ပါနော် …။ (၁) ဂရုမစိုက်ပါနဲ့” ကိုယ်ချစ်တာတွေကို သူတန်ဖိုးမထားမှန်းသိပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ကိုတွယ်ကပ်နေတာထက် ဂရုမစိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ် …။ သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေ၊ အချိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ဘက်က လုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာ သူသိအောင် ပြသပါ …။ ဒါမှ သင့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသူ့ဘက်က နားလည်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၂) ဖုန်းခေါ်တာ၊ မက်ဆေ့ပို့တာတွေကို reply မလုပ်ပါနဲ့” သင့်အချစ်တွေကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူ၊ သင့်ကိုဂရုမစိုက်တဲ့သူ၊ သင့်ကိုနာကျင်စေတဲ့သူကို သင့်ဘက်ကလည်း လစ်လျူရှုလိုက်ပါ …။ သူဖုန်းခေါ်တာ၊ မက်ဆေ့ပို့တာတွေကို reply မပြန်ပါနဲ့။ သင့်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတာကို … Read more
May 26, 2022 by MM Daily Life
သင့်ကိုအပျော်ကြံတာမဟုတ်ပဲ လက်ထပ်ဖို့ထိရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချစ်သူမှန်းသိသာစေတဲ့ အချက်များ… အချစ်ရေးတစ်ခုမှာ အကြောက်ရဆုံးကတော့ ကိုယ်က စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပုံအပ်ပြီးချစ်ရသလောက် ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲခံရတာပါပဲ။ ဒါဟာ လူတော်တော်များများလည်း ကြုံရလေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သလို ခံစားရတာလည်း အရမ်းကိုဆိုးရွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲတာလား၊ အတည်တွဲတာလားဆိုတာ ခွဲခြားသိမြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ် …။ အခုဖော်ပြပေးမယ့်အချက်လေးတွေကတော့ သင့်ကိုအတည်တွဲနေတဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင်ဟာ ကံကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲနော် …။ (၁) သင့်အနားမှာနေရင် ရယ်မောပျော်ရွှင်နေမယ် သင့်ကိုအတည်တွဲတဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ဟာ သင့်အနားမှာနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ရယ်မောပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူပါ။ ဟန်ဆောင်ပြီး ပျော်တဲ့ပုံဖမ်းနေတာမျိုးနဲ့တော့ အရမ်းကိုကွာပါတယ်။ သူ့ကိုသင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့၊ သင့်အနားသူ ရောက်လာတာနဲ့ အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြီး ကြည်နူးနေတတ်တဲ့ သူမျိုးပါ …။ (၂) သူ့ရဲ့အပြုအမူမှာပေါ်လွင်နေတယ် ယောကျ်ားလေးတွေဟာ စကားအပိုတွေ၊ တီတီတာတာတွေ သိပ်မပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် … Read more
ဒီနေ့ခေတ်တောင် လိုက်လို့မမှီနိုင်သေးတဲ့ ရာဇဝင်ထဲက အချစ်စကားလုံးများ
ဒီနေ့ခေတ်တောင် လိုက်လို့မမှီနိုင်သေးတဲ့ ရာဇဝင်ထဲက အချစ်စကားလုံးများ (၁) “မမြဝင်းရယ်…လှေလံနှစ်ဖက်နင်းမယ်ဆိုလည်း ကျုပ်ဘက်ကို ပိုပိုသာသာလေး ဖိနင်းလိုက်စမ်းပါဗျာ..။ ” (ဗိုလ်အောင်ဒင်) (၂) “မယ်သီတာရယ် မင်းပုံရိပ်ကလေး မြင်ခဲ့ ကတည်းက စွဲလမ်းခဲ့ရတာပါ..။ မင်းဘာသာ လင်ဘယ်နှယောက်ရဲ့ မယားဖြစ်နေနေ ငါဂရုမစိုက်ဘူး ။ ငါလိုချင်တာ မင်းအချစ်ကိုပါ..။ သိပ်ချစ်လွန်းလို့ မင်းနှလုံးသားကိုရဖို့ ငါ အရူးတစ်ယောက်လို ကြိုးစားခဲ့တာ…ကြည့်ပါဦး..။ ငါ့ဆွေတွေ ၊ မျိုးတွေ အကုန်သေ..ငါ့တိုင်းပြည်ကြီး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေပြီ..၊ မင်းအချစ်ကိုရဖို့.. ငါသေပြဖို့ပဲ.. လိုတော့သလား..ဟင်။ ..” (ဒဿဂီရိ) (၃) ” သေစေနိုင်တဲ့ အဆိပ်တွေပါမှန်း သိသိကြီးနဲ့ ကျုပ်မရှောင်နိုင်ခဲ့တာ မင်းနှုတ်ခမ်းတွေပါပဲ ရွှေအိမ်စည်ရယ်…။ ” (ပရိက္ခရားမင်းသား) (၄) ” သွားပေဦးတော့ စောမွန်လှရေ.. သွားပေဦးတော့။ မင့် … Read more
ဘဝရဲ့လက်တွဲဖော် ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဒီလိုလူမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ…
May 24, 2022 by MM Daily Life
ဘဝရဲ့လက်တွဲဖော် ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဒီလိုလူမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ… လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မိမိ ဘဝတစ်သက်လုံးအတွက် ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်တဲ့အခါ မိမိတစ်ယောက်တည်းအပေါ် သိပ်ချစ်ပြီးချစ်နေတုန်းအချိန် အနစ်နာခံမှု၊ ဘာမဆိုလုပ်ပေးမှု၊ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းအပေါ် ချစ်နေတုန်း ကောင်းခြင်း၊ ယုယခြင်း၊ ရိုးသားခြင်းလောက်နဲ့ ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်ဆိုပြီး ရွေးချယ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး …။ ဘာလို့လဲဆိုတော့… လူဆိုတာ မိမိသဘောကျနေတဲ့အချိန်၊ မိမိသိပ်ချစ်နေတဲ့အချိန်၊ မိမိချစ်နေသောသူကို အရာရာအကောင်းပဲမြင်ပြီး အရာရာခွင့်လွှတ်ပေးတတ်ကြတာ သဘာဝဖြစ်ပါတယ် …။ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေသော တစ်နေ့မှာ… ကိုယ့်အပေါ်မှာ ကြမ်းတမ်းသော အပြုအမူ၊ ရိုင်းစိုင်းသော အပြောအဆို၊ ရက်စက်သော လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ထာဝရ ရန်သူကြီးတွေဖြစ်နေကြတာ လောကမှာ မြင်နေကြရမှာပါ …။ အဲ့တာကြောင့်…လူတစ်ယောက်ကို ဘဝအတွက်တစ်သက်လုံး ရွေးချယ်တဲ့အခါ – ကိုယ်နဲ့ လက်တွဲမဲ့သူက တစ်ခြားသူတစ်ဦးပေါ် – တကယ် … Read more
April 25, 2022 by MM Daily Life
လက်ရှိတွဲနေတဲ့သူနဲ့ ရေစက်ပါမပါသိနိုင်မယ့်အချက်… ရေစက်သာ ပါလာရင် ကြံဖန်ပြီးဆုံ ရသလိုပဲ ရေစက် မပါရင် ကြံဖန်ပြီးလွဲတယ် ဆိုတဲ့စကားလေး ကြားဖူးကြ မှာပါ။လူတိုင်း ကရေစက် ပါလို့တွေ့ဆုံ ကြသလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် ဆိုတာ လည်းအတိတ်ဘဝကဆုံဖူး ဆုတောင်း ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆုတောင်းတွေကြောင့် အခုဘဝ မှာလက်တွဲ ဖော်အနေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တယ်လို့ ယုံကြည် ကြပါ တယ်။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်တစ်ကြိမ် တစ်ခါမှ မဆုံဖူးပါပဲ မြင်မြင် ချင်းချစ်မိတဲ့ အချစ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝကရှေးရေစက်ကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ အချစ်လို့ယုံ ကြည် ထားကြ ပါတယ်။သူနဲ့ကိုယ် နဲ့ရေစက် လားဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ၁။ ပထမဆုံးဆုံတဲ့ အခါ ရင်းနှီးနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုး သူနဲ့ပထမ ဆုံးစတွေ့တဲ့ အချိန်မှာ အရင်ထဲ ကတွေ့ခဲ့ဖူးသလို … Read more
ချစ်သူ ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်အဆင့်မှာလဲ ချစ်သူတိုင်းဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့စာလေးပါ
ချစ်သူတွေ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့အဆင့် (၇)ဆင့် ဖတ်မိတာတော်တော်သဘောကျလို့ သူငယ်ချင်းလည်းဖတ်ရအောင်ဝေမျှတယ်တိုက်ကြည့်ရအောင်နော် အဆင့် (၁) အရူးအမူးဖြစ်ကြတဲ့ အဆင့်ဒါကတော့ ချစ်သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ ပထမဦးဆုံး အဆင့်ပါ ဒီအဆင့်မှာ ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းဆွဲဆောင်ကြပါတယ်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြစ်မမြင်ကြဘဲ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကောင်းကွက်တွေပဲ ကွက်မြင်ကြတဲ့ အဆင့်ပေါ့။ အဆင့် (၂) နားလည်မှုရလာတဲ့ အဆင့်ဒီအဆင့်မှာတော့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပိုသိလာကြပြီ ညဘက်တွေဆို ချစ်သူနဲ့ ဖုန်းတွေအကြာကြီးပြောမယ်မိသားစုအကြောင်းတွေ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းတွေ လျို့ဝှက်ချက်တွေ အကုန်ပြောမယ်ပြီးရင် ချစ်သူဆီကလာတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တိုင်းက ကိုယ့်အတွက် ချိုမြိန်နေမယ်။ ပျော်ရွင်စရာအချိန်လေးတွေပေါ့။ အဆင့် (၃) အနှောင့်အယှက်ဝင်တဲ့ အဆင့်ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ပြသနာလေးတွေ နည်းနည်းစလာပြီကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပထမဦးဆုံး ရန်စဖြစ်ကြတဲ့အချိန်လေးတို့စကားများပြီး စိတ်ကောက်ကြတဲ့အချိန်လေးတို့ကို ပြန်မြင်ယောင်ကြည့်ပေါ့ဒါပေမယ့် အဲ့အနှောင့်အယှက်လေးတွေက လွယ်လွယ်နဲ့ ပြီးသွားတာလေးတွေပါပဲ။ အဆင့် (၄) ပုံသွင်းတဲ့ အဆင့်ဒီအဆင့်မှာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် … Read more
ဖူးစာရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးကြမှာပါ… သင့် ဖူးစာရှင်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ…
April 16, 2022 by MM Daily Life
ဖူးစာရှင် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်နဲ့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့မလဲ ဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ မှန်းလို့မရပါဘူး။ဒါပင်မဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်လို့ ထင်သောသူက ကိုယ်နဲ့တူညီ ချက်တွေကတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လို တူညီချက်လဲ ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၁. လက်ချောင်းလေးတွေက တူနေတယ်။သူကိုတွေ့တဲ့နေ့မှာ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ဘူး သူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးကို ကြည့် လိုက်သောအခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တော်တော်တူနေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက ပုံစံကနည်းနည်း ထူးဆန်းနေတာကြောင့် တူတဲ့သူက ရှားပါတယ်။လက်ချောင်း တင်မက လက်သည်းလေးတွေ လည်း တူနေတာပါ။ ၂. စိတ်ထဲကနေရာချင်းလဲ တူနေတယ်။သူနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခါ ဘာရယ်လို့မဟုတ် ငယ်ငယ်တုန်းက သွားခဲ့တဲ့နေရာထဲက အကြိုက်ဆုံးနေရာလေးတွေလည်း တူနေတယ်။သူနဲ့ ကြီးပြင်း တဲ့နေရာက မတူပင်မဲ့ အကြိုက်ဆုံးနေရာလေးတွေက တူတူပဲ ဖြစ်နေတာဟာ တော်တော် ထူးဆန်းပါတယ်။ … Read more
ချစ်သူကို ရင်ခွင်ထဲမှာ တုန်တတ်သွားစေမည့် အနမ်း 10 မျိုး
April 8, 2022 by MM Daily Life
ဒီအနမ်း (10) မျိုးထဲက ကျနော့် ချစ်သူကို မေးကြည့်တယ်။ ဘယ်ဟာကို ပိုကြိုက်သလဲ လို့ ။ သူကတော့ တစ်မျိုးစီ ကြိုက်တာချည်း ပါပဲ တဲ့။ အဲဒါကြောင့် လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ကျား မ မရွေး စားသုံးနိုင်ပါ စေကြောင်း ရည်စူးပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။ (1) ရေတံခွန်အနမ်း ချစ်သူလေးနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ တောင်အမြင့်ပေါ်က စီးကျလာတဲ့ ရေတံခွန်လို ချစ်သူ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွေ့ဖက်ထားပြီး အားပါးတရ တလစပ် နမ်းခြင်း (2) ရွှင်ပျော်ပျော်အနမ်းချစ်သူ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ယားတတ်တဲ့ နေရာတွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တို့ ဆိတ် ရင်း ရယ်ရွှင်လာ အောင်လုပ်ပြီးမှ … Read more
ဒီ (၅)ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကောင်လေးမျိုးကို နှစ်ဆပိုချစ်ပါ
April 6, 2022 by MM Daily Life
သင့် ချစ်သူ မိန်းကလေး ကို ရင်ခုန်သံ မြန်လာစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ ?ယခုဖော်ပြမယ့် အချက် (၅) ချက်က အရမ်း Romantic မဆန်ပေမယ့် သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေး ဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ သင့်ကို နှစ်ဆပိုချစ်လာမှာပါ ၁- သူမ ကို အမြဲ ကာကွယ်ပေးခြင်းသူမ နဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရုတ်တရက် နေအရမ်းပူလာရင် သင် က ထီးမိုးပေးတာ၊ သူမ သွားမယ့် လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ တံခါးမှန်သမျှကို သင်က ကြိုဖွင့်ထားပေးတာ၊ သူမ နဲ့ ကားအတူစီးလာရင်လည်း ကားတံခါးကြိုဖွင့် ထားပေးတာ၊ အစရှိတဲ့အချက်တွေဟာ သေးသေးမွှားမွှားလို့ ထင်ရပေမယ့် သင့် ချစ်သူ မိန်းကလေး ဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ သင့်ကို လူကြီးလူကောင်း အဖြစ် … Read more
နှစ်ဦးသားချစ်မိပြီဆိုရင် အမျိုးသား တွေ လိုချင်တဲ့ အရာ (၆) ခု
March 20, 2022 by MM Daily Life
နှစ်ဦးသားချစ်မိပြီဆိုရင် အမျိုးသား တွေ လိုချင်တဲ့ အရာ (၆) ခု အစပိုင်းမှာ မသိသာပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီအရာတွေ မရတာကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နှစ်ဦးသားချစ်မိပြီဆိုရင် အမျိုးသား တွေ လက်တွဲဖော် ဆီက မျှော်လင့်တဲ့အရာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ စစတွဲချင်းမှာ ဒီအရာတွေမရလို့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ အချိန်ကြာလာရင်တော့ ပြဿနာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မဝေးနိုင်တဲ့အခါ နှစ်ဦးသား ပြဿနာ က တအုံ့နွေးနွေး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီ့အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ယောကျာ်း တစ်ယောက် မျှော်လင့်တတ်တာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ( ၁ ) လေးစားမှု လေးစားမှု နဲ့ လူ အထင်ကြီးခံချင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသား တွေဟာ သူတို့လက်တွဲဖော် က လေးစားတဲ့အပြုအမူမျိုးပြတဲ့အခါ အဆိုပါ လေးစားမှု ကို လေးနက်တဲ့အချစ်အဖြစ် … Read more